Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ, ဟစ်စပန်းနစ်နှင့်အတူ autochthonous ၏ပေါင်းစပ် | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 24/05/2021 13:15 | gastronomy, မက္ကစီကို
Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာတွင်အရေးကြီးသောအခြေခံရှိပါသည် ပင်လယ်ထုတ်ကုန်။ အချည်းနှီးမဟုတ်သည်မှာဤဒေသသည်မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့တွင်တည်ရှိပြီးကီလိုမီတာများစွာရှည်လျားသောကမ်းရိုးတန်းရှိသည်သာမက၎င်းကို၎င်း၏အမည်ပေးသည့်မြို့သည်နိုင်ငံ၏အရေးအကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်။
Veracruz သည်စပိန်တွင်ပထမဆုံးတည်ထောင်ခဲ့သောမြို့လည်းဖြစ်သည် မက္ကစီကို။ ထို့ကြောင့် ဟစ်စပန်းနစ်အစိတ်အပိုင်း က၎င်း၏ gastronomy အတွက်အလွန်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည် ကိုလံဘီယာမတိုင်မီ Mesoamerican အစဉ်အလာ နှင့် အာဖရိကနှင့်ကာရစ်ဘီယံအစားအစာများ၏ဒြပ်စင် ဒါကြောင့်အရသာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရသာဖြစ်သကဲ့သို့အစွမ်းထက်တစ် gastronomy မှမြင့်တက်ပေးရန်။ Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာများအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါကဆက်လက်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
1 Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ: သမိုင်းတစ်နည်းနည်း
2 Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ - လူကြိုက်အများဆုံးဟင်းလျာများ
2.1 Veracruz စတိုင်ငါး
2.2 Araczala tumbada, Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ၏အခြားခဲဖွယ်စားဖွယ်
2.3 minced သို့မဟုတ် pinched
2.4 Zacahuil သို့မဟုတ် Sacahuil
2.5 ဏန်း chilpachole
2.6 အဆိုပါ mogo mogo
Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ: သမိုင်းတစ်နည်းနည်း
Veracruz gastronomy နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သမျှသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်စိုက်ပျိုးသောထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကြောင့်ကြွယ်ဝသောအပူပိုင်းနှင့်အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်မင်းတို့ပထမပြောချင်တာက Veracruz ရဲ့ပုံမှန်အစားအစာအကြောင်းအနည်းငယ်ပဲ။ စပိန်များသည်သူတို့၏အစားအစာမှထုတ်ကုန်များစွာကိုယူဆောင်လာသည် သူတို့ထဲတွင်, ပဲ, ဆန်, ဂျုံနှင့်သံပုရာ။ ဒါပေမယ့်လည်းကဲ့သို့သောအသား ဝက်သား ဒါမှမဟုတ်၏ ကြက် သူ့ကိုကဲ့သို့ရတနာ သံလွင်ဆီ နှင့် ကြက်သွန်ဖြူ.
Veracruz နိုင်ငံများတွင်တည်ထောင်ပြီးသည်နှင့်အခြေချနေထိုင်သူများသည်ကိုလံဘီယာမတိုင်မီကအစားအစာတွင်အစဉ်အလာရှိပြီးဖြစ်သောအခြားထုတ်ကုန်များစတင်စိုက်ပျိုးလာကြပြီးအချို့မှာမူရေပန်းစားသည်။ သူတို့တွင်ပါဝင်သည် ပြောင်းဖူးအဆိုပါ ကော်ဖီ နှင့်အသီးကိုသီးကြိုက်တယ် နာနတ်သီး, အုန်းသီး, sapote, သရက်သီး, guava သို့မဟုတ်လိမ္မော်.
၁၉ ရာစုအတွင်း၌ပင် Veracruz ၏အစွမ်းကိုကြွယ်ဝစေသည့်ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးမှပြောင်းရွှေ့လာသောလူသစ်များရောက်ရှိလာသည်။ အာရပ်, ကာရစ်ဘီယံ နှင့်ကနေလာမယ့် ဥရောပနိုင်ငံများတွင်။ ဤအရာအားလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် မျိုးကွဲသုံးခု ဒီမက္ကဆီကန်ပြည်နယ်၏ပုံမှန်အတွင်းရှိအစားအစာ။ သူတို့ကြည့်ရအောင်
အာဖရိကန်အမေရိကန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ Creole အစားအစာ။ ၎င်း၏နာမ၌ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ကစပိန်, ဇာတိနှင့်အာဖရိကအချက်အပြုတ်ဒြပ်စင်ဖျူး။ ၎င်းသည်အများစုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပုံမှန်အသုံးပြုသောထုတ်ကုန်များအနက်ကိုပီလောပီနံ (cassava) ဖြစ်သည်၊ စပိန်သည်ယမ်းကိုဤဥဥနှင့်ဆင်တူသောကြောင့်တိတိကျကျခေါ်ခဲ့သည်။ ပြောင်းဖူး၊ သကြားသို့မဟုတ်ဂျမေကာပန်းနှင့်တာမင်ဒင်စသည့်နံ့သာမျိုးများ။
Huasteca အစားအစာ။ ဒါဟာအစဉ်အလာအပေါ်အခြေခံသည် ဆယ်ကျော်သက်မြို့Veracruz ၏မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ အဓိကဇာတ်ကောင်များမှာပြောင်း၊ အဖြူ၊ ခရမ်းရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်စသည့်အမျိုးမျိုးသောပြောင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပုံမှန်ချက်ပြုတ်နည်းများများထဲတွင်ဖြစ်ကြသည် zacahuillမတူကွဲပြားသောတိရစ္ဆာန်များမှအသားများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောပြောင်းဖူးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမုဆိုး၊ မုန့်စိမ်း၊ က မှဲ့က de nopales နှင့် huasteco ဟင်းရည်.
Totonac အစားအစာ။ မြောက်ပိုင်းနှင့်အလားတူပင်၎င်းသည်ပြောင်းဆန်၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ပဲများအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်း၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများများထဲတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည် သရဲ (ဟစ်စပန်းနစ်ခေတ်မှပြောင်းဖူးအခြေခံသောအချိုရည်များ) နှင့် မက်လီ.
Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ - လူကြိုက်အများဆုံးဟင်းလျာများ
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ Veracruz ရဲ့ပုံမှန်အစားအစာမှာအရေးကြီးတဲ့အခြေခံရှိတယ် ရေထွက်အစားအစာ, ဒါပေမယ့်လည်းအရသာပါဝင်သည် ဝိုင် ဒေသခံထုတ်ကုန်နှင့်အတူလုပ်လေ၏။ ဒီဟင်းပွဲတချို့ကိုငါတို့ပြပါမယ်။
ဤပန်းကန်သည်အရာနှစ်ခုလုံးကိုသမုဒ္ဒရာ၏အသီးများနှင့် Veracruz ပြည်၏အသီးနှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ထားသည်။ ငါးဖမ်းပိုက်မှ cabrilla အထိ snook, tilapia နှင့် basal အထိငါးများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်အများဆုံးအသုံးပြုသည် ငါးပါးနီအဖြစ်ဒေသတွင်း၌လူသိများသည် ဟူချန်ဂိုအလွန်အရသာရှိတဲ့သန္တာကျောက်တန်းငါးတစ်ကောင်။
သို့သော်ဤပုံမှန်စာရွက်၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်ငံပြာရည်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်မက္ကဆီကိုတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မယားပါဘူး။ ၎င်းပါဝင်ပစ္စည်းများတွင်သံလွင်ဆီ၊ ပင်လယ်အော်အရွက်၊ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊
၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ငံပြာရည်ရရှိပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုမီးဖိုထဲရှိငါးများနှင့်ပြုလုပ်သည်။ တိကျစွာ၎င်းကိုစပ်ထိတွေ့စေရန်၎င်းကိုထည့်နိုင်သည် cuaresmeñoငရုတ်သီး ဆန်ဖြူ၊ သံသယမရှိဘဲ, တစ် ဦး အစာအိမ်အံ့။ ခြင်း။
Araczala tumbada, Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ၏အခြားခဲဖွယ်စားဖွယ်
Araczala tumbada, Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာတွင်အဓိကတစ်ခုဖြစ်သည်
ဒါကညီမျှတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်စာ paella၎င်း၏ပိုင်ထိုက်သောရှိပါတယ်ပေမယ့်။ ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာဆန်အပြင်ပုစွန်၊ ကဏန်း၊ Clam နှင့်အခြားပင်လယ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည် မင်္ဂလာပါ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ငရုတ်ကောင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ နောက်ဆုံး၌၎င်း၏အရသာသည် parsley ရွက်၊ oregano၊ နံနံနှင့် epazote တို့ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
၁၉ ရာစုတွင် Veracruz ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်သူတို့၏အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသောတံငါသည်များ၏အစားအစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီပန်းကန်၏ဇာစ်မြစ်ကိုရှာဖွေရမည်ဟုထင်ရသည်။ ထို့အပြင်သိလိုစိတ်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းကိုပြင်ဆင်ထားကြောင်းညွှန်ပြရန်၎င်းကို“ အိပ်ခြင်းသို့” ခေါ်ဆိုသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောလိမ့်မည် အချစ်.
minced သို့မဟုတ် pinched
ဒေသ၏အလယ်ဗဟိုတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်၊ Salsa နှင့်အတူပြောင်းဖူး tortillas ထိပ်ပေါ်မှာနှင့် ranchero ဒိန်ခဲနှင့်ကြက်သွန်နီနှင့်အတူအပါအ။ သူတို့က၏နာမကိုခံယူ မင်္ဂလာပါတိတိကျကျပြောရရင်ကိတ်မုန့်ရဲ့အနားကချဉ်ပေါက်နေလို့ငံပြာရည်မကျနိုင်လို့ပါ။
သူတို့ကကြည့်လိုက်စမ်း မြတ်နိုး သူတို့ဟာနိုင်ငံရဲ့ကျန်ဒေသတွေမှာလုပ်ထားတာပါ၊ တကယ်လို့သင်က Veracruz မှာစားစရာပုံမှန်ရှိချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအရသာရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုဒေသရှိဒေသခံများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းကိုယူလေ့ရှိသည် desayuno.
Zacahuil သို့မဟုတ် Sacahuil
El တကယ ၎င်းသည် Veracruz တွင်သာမကမက္ကဆီကိုတစ်ခွင်တွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရွက်ပတ်ရစ်ချက်ပြုတ်ပြောင်းဖူး။ သို့ရာတွင် zacahuil သည် Huasteca အစားအစာ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာအတိအကျပါ tamရာ Tamaleတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှာတွေ့နိုင်တာအကြီးဆုံး။ သို့သော်၎င်းတွင်သမိုင်းကြောင်းပိုရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းရာချီသောဒေသခံများနည်းတူပြောင်းဖူးမုန့်စိမ်းကိုဤစာရွက်တွင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ခေါ်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် nixtamal သောအစေ့လျော့နည်းမြေပြင်နှင့်တစ် ဦး ထက်ပိုအက်အသွင်အပြင်ရှိပါတယ်။
ဒီမုန့်စိမ်းနဲ့ပြည့်နေတယ် ဝက်သား, ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်းနှင့်ဝက်သားသို့မဟုတ်ကြက်ဆင်အသားအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများအကြား။ ထိုငှက်သည်အမေရိကရှိကြက်တူရွေးနှင့်တူသောငှက်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။
Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာလည်းပါဝင်သည် ဟင်းချို အလွန်အရသာရှိတဲ့နှင့်အဆာ။ ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် chilpachole, အဘယ်သူ၏ဇစ်မြစ်ပြင်သစ်အစားအစာမှစွပ်စွဲနေကြသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတစ်ခုထက်ပိုပြီးဘာမှမဟုတ်တာလေ ပင်လယ်စာဟင်းချို ငါးနှင့်ကဏန်း (Veracruz ကမ်းရိုးတန်းမှအပြာရောင်ဂဏန်း) ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
သို့သော် chilpachole သည်ရိုးရာပင်လယ်စာဟင်းရည်ထက်များစွာပိုမိုအားကောင်းသည်။ စတင်ဘို့, ကနှင့်ကိုက်ညီမှုပေးထားသည် ပြောင်းဖူးမုန့်စိမ်း။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးခြောက်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဤအရာအားလုံးသည်၎င်းနှင့်ဆင်တူသည့်ဖွဲ့စည်းမှုကိုပေးသည် နေ၎င်းသည်အစဉ်အလာချိုမြိန်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးသောဟစ်စပန်းနစ်မတိုင်မီကဖြစ်သောသောက်စရာတစ်မျိုး။
ပေါ့ပါးသည် Izote ပန်းပွင့်ဟင်းရည်။ ၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းသည်အမေရိကအလယ်ပိုင်း၏ဤဇာတိအပင်ဖြစ်ပြီးရေငန်ပုစွန်များ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ pipian နားရွက်။ အလှည့်တွင်၎င်းသည်အခြားဟင်းလျာများအတွက်အသုံးပြုသည့်ဖရုံသီးအစေ့များနှင့်ပြုလုပ်ထားသောခေါက်ဆွဲများဖြစ်သည်။
အဆိုပါ mogo mogo
Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ၏အခြားခဲဖွယ်စားဖွယ် Banana mogo
Veracruz ၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများထဲတွင်၎င်းသည်အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် အာဖရိကအမြစ်များ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လည်းခေါ် ချစ်သူဒါကလွဲလို့တခြားဘာမှမရှိဘူး အစိမ်းရောင် Plantain စင်ကြယ်သော.
၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သူတို့၏အသားအရေနှင့်အတူ၎င်းတို့သည်ရေပွက်ပွက်ဆူနေသော၌ချက်ပြုတ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဖုံးအုပ်မှုတွေကွဲသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကမှန်ကန်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမရောက်မချင်းသူတို့ကိုနှိပ်စက်ဖို့ထောပတ်နဲ့ဆားထည့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီပန်းကန်ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး ခိုင်မြဲစွာအေးခဲစေရန်ရေခဲသေတ္တာတွင်အအေးခံထားရသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ပဲ၏ဘေးထွက်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
ငါတို့ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ဟင်းလျာများဟာအရသာရှိရင် Veracruz pastries တွေကသိပ်နောက်မကျဘူး။ အားလုံးနီးပါးသည်သူ၏ချက်ပြုတ်နည်းများအပေါ်အခြေခံထားတယ် ဂျုံ နှင့်အရှိဆုံးစပ်စုသောသကြားလုံးတို့တွင်ကျနော်တို့ဖော်ပြပါလိမ့်မယ် chogostas, စားသုံးနိုင်သောရွှံ့နှင့်အဘယ်သူ၏ဇာစ်မြစ်မတိုင်မီဟစ်စပန်းနစ်ကာလမှစတငျနှင့်အတူအချို့သောဘောလုံး။
ပိုပြီးရိုးရာရှိပါတယ် နတ်သမီးပုံပြင်, အုန်းသီး meringue နှင့်ပြည့်စုံ Taco တစ်မျိုး ကွမ်းခြံကုန်း, အချို့ polvorones သကြားနှင့်သစ်ကြံပိုးနှင့်ဖုံးလွှမ်း။ သူ၏အနေဖြင့် တေးသီချင်း ဒါဟာ anise နှင့်အတူအနံ့အရသာနှင့် Berijao အရွက်ထဲမှာပတ်ရစ်စားတဲ့ပြောင်းဖူးနှင့်သကြားမုန့်စိမ်းသည်။
La ရှေဖရုံသီး သူသည် Veracruz သကြားလုံးများစွာ၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် frittersဤအရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ, ပေမယ့် ကုလားပဲmeringue နှင့်ပြည့်စုံသော။ နောက်ဆုံး၊ နတ်သမီးပုံပြင် ပြောင်းဖူး၊ ထောပတ်နှင့်သကြား၊ Veracruz ကနေ marzipan ၎င်းကိုမြေပဲအစားမြေပဲရှိခြင်းဖြင့်ဖော်ပြသည်။
မင်းတို့အကြောင်းကိုမင်းတို့ပြောပြပြီးပြီ နေ၎င်းသည်အသီးများပေါ် မူတည်၍ မတူညီသောအရသာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငှက်ပျောသီး၊ ဖရုံသီး၊ ပြောင်းနှင့် coyol (အုန်းသီးနှင့်အလားတူသောအသီး) အကြောင်းပြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Veracruz တွင်လည်းအသုံးပြုသည် ရက်စက်တယ်ဒါကြောင့်စပိန်၌ရှိသကဲ့သို့မလုပ်ပေမယ့်။ ထိုတွင်ဆန်နှင့်သစ်ကြံပိုး၊ vanilla ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ပိုပြီးပုံမှန်နေဆဲကဲ့သို့သောအချိုရည်ဖြစ်ကြသည် ချစ်သူ, ပူစီနံနှင့်ဖွဲ့ တင်းပါး။ ၎င်းတွင်ကိုကိုး၊ ဆန်၊ သစ်ကြံပိုးနှင့် azquiote ကဲ့သို့သောသစ်သီးများရှိသောကြောင့်အရသာရှိလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံး၊ နွား ၎င်းသည်သရက်သီးကဲ့သို့သောအခြားအရသာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းကြံဘရန်ဒီ၊ နို့ဆီနှင့်မြေပဲထောပတ်တို့ပါဝင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ။ သင်တွေ့ရမည့်အတိုင်း၎င်းတွင်အရသာရှိသောအမျိုးစုံသောဟင်းပွဲများပါဝင်သည်။ သို့သော် Veracruz သည်၎င်း၏ gastronomy ကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေရုံသာမကဘဲလေ့လာရန်သင့်သည် Veracruz မှာဘာသွားရမလဲ။ ကူးစက်ရောဂါ၏အကန့်အသတ်ကြောင့်သင်မလုပ်ဝံ့ပါကဤဆောင်းပါးသည်ဤတွင်ပါသောဆောင်းပါးဖြစ်သည် နိုင်ငံများအားဖြင့်ခရီးသွားလာရန်လိုအပ်ချက်များ ဒါကြောင့်သင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » မက္ကစီကို » Veracruz ၏ပုံမှန်အစားအစာ
မေလမှာဘယ်ကိုသွားရမလဲ။ အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု